Condemnation of destroying IDPs’ temporary shelters – Kyaw Zaw Oo's Blog
January 27, 2020 December 10, 2021 kyaw zaw oo
Condemnation of destroying IDPs’ temporary shelters
[ English Text / Zawgyi / Unicode ]
Some Tatmadaw troop reportedly destroyed some temporary shelters at Sanyin IDP camp site of Myebon township during the night of 25th January 2020. I would like to inform the Myanma Tatmadaw that such acts are against the Geneva Conventions.
Rakhine State Parliamentarian
စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ယာယီတဲမ်ားအားဖ်က္ဆီးမႈကို ရႈတ္ခ်ျခင္း
ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၂၀ ဇြန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ညဥ့္ပိုင္းတြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ စညင္း ယာယီ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းရွိ ယာယီေနထိုင္ရာ တဲအခ်ိဳ႕အား ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္ ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
၂၀၂၀ ဇြန္န၀ါရီလ (၂၈) ရက္
စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များ၏ ယာယီတဲများအားဖျက်ဆီးမှုကို ရှုတ်ချခြင်း
မြန်မာတပ်မတော် တပ်ဖွဲ့အချို့သည် ၂၀၂၀ ဇွန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့ညဉ့်ပိုင်းတွင် မြေပုံမြို့နယ် စညင်း ယာယီ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းရှိ ယာယီနေထိုင်ရာ တဲအချို့အား ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည် ဟု သတင်းများအရ သိရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များမှာ ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများ နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ဇွန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်
Previous ပလက်ဝ ခမီးအချို့က အမျိုးမတော်ချင်ဘူး ဆိုတဲ့ကိစ္စ
Next ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အရေးပေါ်မှတ်ချက်